नेइमार: नौटंकी र फुटबल दुबैमा अव्वल – Everest Dainik – News from Nepal
नेइमार: नौटंकी र फुटबल दुबैमा अव्वल
यस विश्वकपमा अर्जेन्टिनाका लियोनेल मेस्सी र पोर्चुगलका क्रिश्चियानो रोनाल्डो घर फर्किसकेपछि प्रतियोगिता सुरु हुनुअघि खुबै चर्चामा रहेका तीन सुपरस्टारहरूमध्ये नेइमारको टीम मात्र प्रतियोगिताको अगिल्लो खेल खेल्न रुसमा बसिराखेको छ।
प्रतियोगिता सुरु हुनुभन्दा अगाडि विश्वकै सर्वाधिक महँगा फुटबलर नेइमार निकै चर्चित थिए। तर लीग चरणमा स्फूर्तिका पर्याय मानिने नेइमार केहि सुस्त देखिए। नकआउट चरणमा पुग्दापुग्दा नेइमार लयमा फर्किए र उनले मेक्सिको विरुद्ध एक गोल गरे र अर्को गोल गर्न सघाए।
रसिया विश्व : ब्राजिल र स्विट्जरल्यान्ड भिड्दै, आज जम्लान नेमार ?
तर अहिले नेइमार यस जीतका साथसाथै एउटा अर्को कारणले पनि चर्चित रहेका छन्।
ब्राजिलको दैनिक समाचारपत्र ‘ग्लोबो’ले लेखेको छ’ “नेइमारले ब्राजिललाई खुसी पारे तर सारा संसारलाई रुष्ट पारिदिए।” नेइमार, अर्थात यस्तो फुटबलर जसले एउटै खेलमा उत्कृष्ट फुटबल प्रतिभारा वाहियात नौटंकी सँगसँगै प्रस्तुत गरे।
प्रसंशा पनि आलोचना पनि सँगसँगै
सोमवार राउण्ड-सिक्सटीनमा मेक्सिको विरुद्ध खेल्ने क्रममा नेइमार साँच्चिकै नेइमार अवतारमा प्रकट भए। ब्राजिलको बेल्जियम विरुद्ध २-० को जीतमा उनको निर्णायक भूमिका रह्यो।
मेक्सिकोमाथिको जितसँगै ब्राजिलले बनायो यस्ता रेकर्ड, नेइमारले पछि पारे मेसी र रोनाल्डोलाई
तर उनी मैदानमा गोल गर्नु भन्दा अन्य कारणले पनि चर्चामा रहे। उनी खेल अवधिभरि कुनै न कुनै रूपमा दर्शकहरूको ध्यान आकर्षणका केन्द्र बनिरहे। उनी घरि कुनै खेलाडीसँग भिड्ने गर्थे भने कहिले गम्भीर चोट लागेको नाटक गरेर लड्थे। यसले बेलाबेला मैदानमा ठुलै दुर्घटना भएको जस्तै लाग्थ्यो।
उनका तटस्थ समर्थकहरूले उनको खेलको प्रसंशा त गर्दछन् साथै उनको यस बानीको आलोचना समेत हुने गर्दछ।
ब्राजिल र मेक्सिकोबीचको खेलमा पनि खेल समाप्त हुनुभन्दा २० मिनेट पहिले नेइमारकै कारण केही मिनेट खेल रोक्नुपर्ने स्थिति आयो।
भएको के थियो भने मेक्सिकन खेलाडी मिगुअल लायुनको गोडा नेइमारको गोलीगाँठामा पऱ्यो। नेइमार असह्य पीडा भएजस्तै जोरजोरले कराउन थाले।
नेइमारको बहिनी राफेला दाइकाे खुसीयाली मनाउँदा मनाउँदै घाइते !
यो देखेर मेक्सिकोका खेलाडी, रेफ्री र अन्य अधिकारीहरू तुरन्त त्यहाँ पुगे। एकछिन् मैदानमा विवाद नै होला जस्तो लाग्यो।
म्याच सिद्धिएपछि लायुनसँग सम्बन्धित प्रश्नमा उनका म्यानेजर टाइटेले भने, “लायुनले नेइमारमाथि नराम्ररी टेकेका थिए, मैले आफैँ स्क्रीनमा देखेको।”
त्यसमा नेइमारले गजबको प्रतिक्रिया दिए, “हेर्नुस् मलाई लाग्छ यो सब मलाई होच्याउन गरिएको थियो।”
“मलाई प्रसंशा या आलोचनाको कुनै पर्वाह छैन, किन भने यस्ता कुराले तपाईंको प्रवृत्तिलाई नै प्रभावित गर्न सक्छन्। पछिल्ला दुई म्याचहरूमा मैले ‘प्रेस’सँग कुरा गरेन किनभने म कुरा गर्न चाहन्नथे।” नेइमार भन्छन्, “मैले खेल्नुपर्छ, आफ्नो टीमको लागि र साथीहरुका लागि।”
कस्तो छ अरुको प्रतिक्रिया
एस्टर भिल्लाका पूर्व स्ट्राइकर डियोन डब्लिन भन्छन्, “म नेइमारको यस नौटंकीप्रति लज्जित छु।”
उनी भन्छन्, “उनी संसारका महान खेलाडी हुन्, तर जब उनी मैदानमा यसरी गुल्टिन्छन् साँच्चै दुःख लाग्छ। अचम्मको कुरा तपाईं फुटबल खेल्नुस् न त्योभन्दा राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ।”
सकारात्मक होउन् या नकारात्मक तर नेइमारका बारेमा प्रतिक्रियाहरू भने थुप्रै आउने गर्दछन्। इन्स्टाग्राममा उनका १० करोड फलोअर छन्। उनले पछिल्लोपल्ट गरेको पोस्टमा १५ मिनेटभित्र १० लाख लाइक आएका थिए।
ट्विटरमा उनको एउटा अर्को तस्बिर सेयर भैराखेको छ जसमा उनी स्विट्जरल्याण्ड विरुद्धको म्याचमा लडेका छन्।
यो तस्बिर र यससँग सम्बन्धित भिडियो, मेमे र जिफहरू सामाजिक संजालमा भाइरल हुन बेर लागेन। एउटा पोस्टमा र फरक-फरक तरिकाले पीडाले कराइरहेका आठ तस्बिर राखिएका छन् र सँगै प्रश्न समेत गरिएको छ- तपाईंलाई कति दुःखिराखेको छ?
कोस्टारिकासँगको म्याचमा समेत नेइमारसँग एउटा घट्ना घटेको थियो। उक्त म्याचमा रेफ्रीले तनाव कम गर्ने उद्देश्ले नेइमारको पाखुरामा हातले छोएका थिए, नेइमारले तुरन्त उनको हात हटाइदिए, र भने “मलाई नछोऊ!”
विश्वकप फुटबलः नकआउट चरणमै नपुगी घर फर्किने १५ टिम को-को ?
जारी विश्वकप फुटबलमा कसको कीर्तिमान के ? हेर्नुहोस्, तथ्य/तथ्यांक
ट्याग्स: Neymar, world Cup 2018